U-Angela Ahrendts unyuka ileli phakathi kwabafazi abanamandla ngokwe-Fortune magazine | Ndisuka mac
U-Angela Ahrendts unyuka phakathi kwabona bafazi banamandla ngokwe-Fortune magazine
U-Angela Ahrendts unyusa ileli hayi ngaphakathi nje kweApple. Imagazini i-Fortune yamthatha njengomnye wabasetyhini ababalulekileyo kunyaka ka-2017. Kwi-Apple Keynote yokugqibela ebibanjelwe kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, wayenendawo ebalulekileyo ekunikezelweni kwezinto ezintsha zeVenkile yeApple. Utshintsho olubalulekileyo olwenziwe kwiVenkile yeApple luye lwamkelwa yitekhnoloji, kunye noluntu ngokubanzi. Ihlala kwindawo ye I-Apple kaMongameli oPhezulu weevenkile. Kwezi ntsuku ukwinqanaba le-13 kuluhlu "lwabafazi abanamandla" ngokwephephancwadi iFortune kule 2017.
Phambi kwakhe sifumana USheryl Sandberg (Igosa eliyintloko lokusebenza kuFacebook), UAbhigayil Johnson (Umphathi omkhulu we-Fidelity Investment), UMarilyn hewson (Umphathi we-Lockheed Martin), Indra Nooyi (Umphathi wePepsiCo,), kunye UMariya Barra (Umphathi omkhulu weGeneral Motors)
Kwiphephancwadi leFortune limele:
Ukusukela oko wacengwa nguTim Cook ukuba ajoyine iApple ngo-2014 (ngaphambili wayesebenzisa uphawu lweBritish brand Burberry), uAhndndts ebephambili ekuyileni ngokutsha ivenkile enkulu yeetekhnoloji kwiminyaka eli-15. Ngenyanga kaCanzibe, inkampani iphehlelele ilindelo ekudala lilindelwe elithi "Namhlanje eApple", elifuna ukongeza imfundo yoluntu ngezifundo zasimahla, kumacandelo afana nokwenza iikhowudi kwimveliso yomculo kunye nokufota. Owesifazane okwinqanaba eliphezulu lika-Apple, ubeka iliso kubasebenzi abathengisayo abangama-60.000 kwaye unoxanduva lokugcina amava ngaphezulu kwesigidi sabathengi bemihla ngemihla. Inkampani yophando eMarketer iqikelela ingeniso edityanisiweyo esuka kwivenkile kunye nentengiso ye-Intanethi ukuba iphantse ibe $ 50.000 yezigidigidi. I-Ahrendts yayiligunya lesibini emva kukaCook- kunye nokuphela komfazi-ukuthatha inqanaba kwintetho kaSeptemba.
Impumelelo ka-Ahrendts ilele kulwakhiwo ngokutsha lweevenkile. Ukuqala ngo-2014, xa wayethatha isikhundla sakhe, waguqula iVenkile ye-Apple wayenza indawo eneenkcubeko ezininzi, apho wabelana khona ngokubonisa, ulwazi ngemveliso kunye nokupheliswa kwemigca ngenkxaso yobuqu kunye neenkonzo zoqeqesho. Kwiveki ephelileyo wayenethuba lokuzibonela ngokwakhe, elilandelayo Ukuvulwa kweVenkile yeApple eChicago, eParis naseMilan.
Ukusuka apha, sikucela ukuba wandise inani leevenkile eYurophu naseSpain, kuba kwimeko yaseSpain, baneeprojekthi ezininzi ezinqabileyo iminyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » U-Angela Ahrendts unyuka phakathi kwabona bafazi banamandla ngokwe-Fortune magazine
I-Oddworld: Ingqumbo yomntu ongaqhelekanga, ubumnandi obonwabisayo ngeMac yakho kule mpelaveki
Iimonitha ezintathu ezingama-27-intshi ezinonxibelelwano lwe-USB-C kwiMacBook kunye neMacBook Pro yethu